War culus oo kasoo kordhay xiisadii Ronaldo & Dambi lagu helay + Qaabka uu isku xalinayo oo xog laga helay – Puntlandtimes
War culus oo kasoo kordhay xiisadii Ronaldo & Dambi lagu helay + Qaabka uu isku xalinayo oo xog laga helay
March 22, 2019 W LAASCAANO
NAIROBI(P-TIMES)- Kubadda cagta caalamka ayaa qaab maadaysi ah u qiimeeyay lacagtii ay xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA ku ganaaxeen weeraryahanka kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo kaas oo loo haystay dabaaldegyo anshax xumo ah.
Ronaldo ayaa loo haystay qaabkii uu u dabaaldegay kaddib guushii ay kooxdiisa ka gaadhay dhigeeda Atletico Madrid kulan ka tirsan wareega siddeed dhammaadka Champions League.
Dabaaldegan oo ah midka xiniinyo is qabadka ayuu hore usoo sameeyay tababare Diego Simeone lugtii hore ee labada kooxood markii Atletico ay 2-0 ku guuleysatay balse waxa kaga daba yimid Ronaldo oo fure u ahaa soo laabashada Juve oo kulankii dambe 3-0 ku guuleysatay.
Haddaba, Waxaany halkan idiinku soo gudbin doonaa qiimaynta mushaharka Cristiano Ronaldo ee bilaha ah, Inta uu maalintii qaato iyo saacadaha ay ku qaadanayso soo saarista lacagta lagu ganaaxay ee €20,000 ah.
Aan ku bilawnee CR7 ayaa xilli ciyaareedkii Bianconeri ka qaadanaya €31,000,000 waana xiddiga ugu mushaharka badan guud ahaan horyaalka Talyaaniga.
Dhinaca kale Ronaldo ayaa bishii xoogsada aduun lacageed oo dhan €2,410,464 halka uu toddobaadkii helo €602,616, Kabtanka Portugal ayaa maalintii qaata €86,088.
Ugu dambayntiina mushaharkiisa saacadii ayaa noqonaya €3,587 halka uu daqiiqad kasta ka xoogasado €59.78 waana qiimo aad u badan marka loo eego mushaharka ciyaartoy.
Haddaba, Mudo intee le’eg ayuu Cristiano kusoo saarayaa aduunka lacageed ee ganaaxa looga dhigay miyayse wax culays ah oo badan saaraysaa?
Cel celis ahaa Ronaldo ayaa lacagta lagu ganaaxay maalintii kusoo saara 5 saacadood iyo 35 daqiiqo waana qiimo aan wax dhibaato ah ku ahayn marka loo eego mushaharkiisa.